Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA: Vaomiera eropeana tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tsy niraharaha ny torohevitra sy porofo naroson'ny fanjakana mpikambana EU sy ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ny vaomiera eropeana.
Ny komisiona eropeana dia mandray fanapahan-kevitra hametraka ny ambaratonga fampiasana ririnina amin'ny 50%.
Ny mpandrindra any Angletera, Sina, Amerika Latina ary Azia-Pasifika dia nametraka fepetra malefaka kokoa.
Ny komisiona dia nanana tanjona misokatra hampiasa ny lalàna mifehy ny slots mba hampiroboroboana ny fanarenana maharitra ho an'ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka, saingy tsy nahomby izy ireo.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanisy marika ny Vaomiera Eoropeana (EC) fanapahan-kevitra hametraka ny ambaratonga fampiasana ririnina amin'ny 50% ho "tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy", ary nanamafy fa tsy noraharahain'ny EC ny torohevitra sy porofo naroson'ny firenena mpikambana ao amin'ny EU sy ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, izay nahatonga ny raharaha ho ambany kokoa tokonam-baravarana.
Ny fanambarana nataon'ny EC dia midika fa, manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny aprily, ny zotram-piaramanidina miasa amin'ny seranam-piaramanidina fehezin'ny slot dia tokony hampiasa ny antsasaky ny andiany tsirairay amin'ireo slot misy azy ireo. Tsy misy fanamaivanana ny famerenana ireo slot amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana mamela ny seranam-piaramanidina hifanaraka amin'ny fandaharam-potoanany amin'ny fangatahana tena misy na ahafahan'ny mpitatitra hafa miasa. Ankoatr'izay, ny lalàna momba ny 'force majeure', izay nampiato ny fitsipiky ny slot raha toa ka misy ny tranga miavaka mifandraika amin'ny areti-mifindra COVID, dia novonoina ho an'ny asa intra-EU.
Ny valin'ireo fanovana ireo dia ny famerana ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina miasa miaraka amin'ny hakingana ilaina hamaliana ireo fangatahana tsy ampoizina sy miovaova haingana, mitarika sidina very maina sy tsy ilaina amin'ny tontolo iainana. Hihamalemy ihany koa ny fitoniana ara-bola eo amin'ny sehatry ny indostria ary hanakana ny famerenana ny tamba-jotra fitaterana an'habakabaka manerantany.
“Nasehon'ny Vaomiera indray fa tsy mifandray amin'ny zava-misy izy ireo. Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mbola miatrika krizy ratsy indrindra amin'ny tantarany. Ny komisiona dia nanana tanjona misokatra hampiasa ny lalàna mifehy ny slots mba hampiroboroboana ny fanarenana maharitra ho an'ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka, saingy tsy nahomby izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia naneho fanamavoana ny indostria izy ireo, ary ho an'ireo fanjakana mpikambana maro izay nandrisika hatrany hamaha vahaolana mora kokoa, amin'ny fikatsahana ny politika izay mifanohitra amin'ny porofo rehetra natolotra azy ireo, "hoy izy. Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny tohan-kevitry ny Vaomiera dia ny fanarenana ny fifamoivoizana intra-UE tamin'ity fahavaratra ity dia nanamarina ny tokonam-baravarana 50% tsy misy fanamaivanana. Ity dia misidina manoloana porofo mivaingana momba ny fomba fijery tsy azo antoka amin'ny fangatahan'ny fifamoivoizana amin'ity ririnina ity, nomen'ny fanjakana mpikambana mpikambana ao amin'ny EU ary koa IATA sy ireo mpikambana ao aminy.